Morarano chrome :: Vehivavy votsotra teo am-pelatanan’ny mpaka an-keriny • AoRaha
Morarano chrome Vehivavy votsotra teo am-pelatanan’ny mpaka an-keriny
Nifanjevo tany Antetezantany-Morarano Chrome, any Ambatondazaka ny zandary sy ny mpaka an-keriny, afak’omaly. Avotra soa aman-tsara ny vehivavy iray, vadina teratany frantsay, rehefa avy nalain’ ny jiolahy an-keriny, tamin’ ny alin’ny 25 mey, tany Ambatomanga Morarano Chrome ihany. Tafatsoaka ireo olon-dratsy.
Nifanehitra tamin’ireo zandary nanao fikarohana an’ itsy vehivavy itsy tao amin’ny saha iray any an-kebakebantany manasaraka ny faritra Betsiboka sy Alaotra Mangoro ireo jiolahy. Tsy voasoroka ny fifandonana. « Nitifitra ireo jiolahy vao nahita mpitandro filaminana. Nisy ny fifamaliana tifitra naharitra minitra maromaro, taorian’izay. Tsy naharesy tosika ny mpitandro filaminana ireo mpaka an-keriny ka nitsoaka. Navotsotr’izy ireo ilay vehivavy, nony avy eo », hoy ny fanazavana avy amin’ireo zandary nanao ny fanenjehana.
Efa tonga soa any amin’ny fianakaviany ity vehivavy lasibatra, 62 taona. Salama tsara tsy nisy naratra izy, saingy reradreraka. Nandeha antongotra ora maro sady narovan’ireo zandary hatrany an-tokantranony tany Ambatomanga izy. Nametrahana mpitandro filaminana miambina ihany ny tranony sao hiverenan’ireo mpaka an-keriny indray.
Fitaterana tsy ara-dalana :: Nahatrarana mpandeha an-tsokosoko indray ny fiara telo sy bajaj iray